के म हिलाको पनि वी’र्य स्ख’लन हुन्छ ?
Homeस्वास्थ्यके म हिलाको पनि वी’र्य स्ख’लन हुन्छ ?
मानव यौ’न प्रतिक्रिया चक्रका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त होला । यसका चरणहरू १. उ’त्तेजनाको चरण, २. Plateau चरण, ३. चर’मसुख चरण र ४ रिजोलुसन चरण हुन् । प्लाटो फेजमा भएको यौ’नलाई निरन्तर रूपमा बढाउँदै लान सकिए एउटा त्यस्तो बिन्दुमा पुगिन्छ जसमा पुगेपछि व्यक्ति यौ’न त’नावबाट मुक्त हुन्छ । यही बेला मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने सुख वा आनन्दहरूमध्ये सम्भवत: सर्वोत्कृष्ट सु’ख अनुभव गर्छ । यसैलाई चर’मसुख भनिन्छ ।
Plateau Phase मा महिलाहरूमा यो’निद्वार अझ खुल्ने तथा त्यसवरिपरिको भाग फुलेर अर्थात् ठूलो भएर आउँछ । यसरी योनिद्वार वरिपरिको भाग बढ्ने भएकाले भगां’कुर अलि भित्र दबेजस्तो देखिन्छ भने स्त’नको आकार केही बढ्छ । आधाभन्दा बढी महिलामा अनुहार र छाला रातो (S’ex Flush) हुन्छ ।
पुरुषले जस्तै यो चरणमा महिलाले पनि आन्तरिक न्यानोपन तथा द’बाब महसुस गर्छन् । मांसपेशीहरूमा त’नाव पैदा हुन्छ, मुटु तथा स्वासप्रश्वासको गति एकदम तीव्र हुन्छ तथा र’क्तचाप बढ्छ अनि चरम’सुखको चरणमा मांसपेशीहरूमा निकै त’नाव आई आफैं खुम्चने तथा खुल्ने हुन्छ । स्वास–प्रश्वास तथा मुटुको गति बढेर दोब्बर हुन्छ र र’क्तचापसमेत वृद्धि हुन्छ । महिलाहरूमा पा’ठेघर तथा यो’निको बाहिरी भाग तथा शरीरको तल्लो भागका मांसपेशीहरू खु’म्चने तथा फुक्ने हुन्छ । पूर्ण चर’मसुख प्राप्त गर्ने क्रममा मांसपेशी खुम्चने–फुक्ने क्रम १० देखि १५ पटकसम्म चल्छ ।
के महिलाको पनि वी’र्य स्खल’न हुन्छ ?
यौ’न उ’त्तेजना हुँदा सफा रंगविहीन रस केही मात्रामा पुरुषको मू’त्रद्वारमा देखिन्छ । यतिबेला महिलाको यो’निबाट प्रश’स्त र’स आउने कुरा हामीलाई थाहै छ । के च’रमसु’खका बेला महिलामा फरक किसिमको रस आउँछ त ? केही अध्ययनले महिलाहरूको पनि ‘स्ख’लन’ हुने कुरा उल्लेख गरेका छन्, तर कतिपय वैज्ञानिकले पुरुषमा वी’र्य स्ख’लन भएजस्तै महिलाको स्ख’लन नहुने कुरा बताएका छन् । त्यसैले महिलाको स्ख’लनको कुरा विवा’दित नै छ ।
एउटा कुरा के भने पुरुषको वी’र्य स्ख’लन महिलामा हुने यस्तो स्ख’लनको घटनाभन्दा निकै फरक कुरा हो ।
आधारभूत रूपमा महिला तथा पुरुषमा यौ’न प्रति’क्रिया चक्र उस्तै भए पनि केही कुरामा भने फरक छ । यदि चर’मसुखको चरणपछि पनि यौ’न st’imuation (स्टिमुलेसन) निरन्तर रूपमा भैरह्यो भने कतिपय महिलाले एकपल्टभन्दा बढी च’रमसु’ख प्राप्त गर्न सक्छन्, तर पुरुषहरूमा भने त्यस्तो हुँदैन । महिला तथा पुरुषबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फरक Refrac’tory Period हो । पुरुषलाई चर’मसु’ख पाएर पुरानै अवस्था फर्किएपछि केही समयका लागि यौ’न रूपमा उ’त्तेजित गर्न सकिँदैन, तर महिलाले यौ’न चर’मसु’खपछि पनि यौ’न क्रि’याकलापलाई निरन्तरता दिन सक्छन् ।
महिलाले कसरी यौ’नसन्तु’ष्टि प्राप्त गर्छन् र के कुरा सहयोगी हुन्छन् ?
पुरुष तथा महिलाको यौ’न प्र’तिक्रिया चक्रमा हुने भिन्नता तथा अन्य कारणले हरेक यौ’नस’म्पर्कमा च’रमसुख सम्भव छैन । पुरुष माथि रहेर गरिने यौ’नसम्प’र्कमा त महिलाको सबैभन्दा बढी यौ’न स’म्वेदनशील अंग भगां’कुरको घर्षण हुँदैन, जति नै लामो लि’ङ्ग भए पनि, त्यसैले लि’ङ्ग केही सानो हुनुलाई चिन्ताको विषय बनाउनु उपयुक्त होइन ।
महिला माथितिर रहेर आफूले चाहेजस्तो ‘कटि’ प्रदेशलाई चलाउन सक्छिन्, अनि भ’गांकु’रलाई हात वा औं’लाले वा यौ’न प्रसाधनजस्तै भाइ’ब्रेटर प्रयोग गरेर यौ’न स’न्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक यो’नि, स्त’न तथा अन्य यौ’न सं’वेदनशील अ’ङ्गको म’र्दन, घ’र्षण अनि चलाउनेजस्ता क्रि’यालापमा संलग्न हुन सकिन्छ । यौ’न क्रि’याकलापमा संलग्न हुँदा पा’क्क्रीडामा संलग्न भए यौ”न उत्ते’जना प्राप्त गर्न र चर’मसुखसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ । यसले यौ’न सम्प’र्कमा संलग्न दुवै जनालाई एकसाथ यौ’न चर’मसुख प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ ।
पुरुषको तुलनामा महिलालाई यौ’न च’रमसु’खसम्म पुग्न केही बढी समय लाग्दा पुरुषले आफ्नो चर’मसु’खपछि लि’ङ्ग झि’क्दा यौ’न क्रि’याकलापले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्दैन र महिला असन्तुष्ट नै बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ । कुनै यौ’नसम्पर्क पुरुषकोमा भने कुनै महिलाको यौ’नसु’ख प्राप्तिलाई ध्यानमा राखेर यौ’न क्रि’याकलापमा संलग्न हुन सके महिलाले यौ’नस’म्पर्कबाट पर्याप्त सुख प्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।
कसैले राम्रो दृश्य देखाउन वा संगीत सुन्न मद्दत गर्न सक्छ, तर त्यसको वास्तविक आनन्द वा भनौं सुखानुभूति त आफैंले गर्नुपर्छ वा गर्न सकिन्छ । यो कुरा यौ’न स’म्पर्कको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।
त्यसका लागि तपाईंले आफूलाई के–कसो गर्दा आ’नन्द आउँछ पत्ता लगाउनुहोस्! यसरी दुवै जनाले एक–अर्कालाई सहयोग गरे दुवैले यौ’न च’रमसु’ख नपाउने कुरै हुँदैन ।
– डा. राजेन्द्र भद्रा/ साप्ताहिक
अनुसन्धान विभागमाथि जनार्दन शर्माको आ क्रो श,- कि विभागले नेताको मात्र जा सु सी गर्छ ?